Xubno ka soo Goostay Shabaab iyo Daacish oo Dib u soo laabtay – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2015 4:41 b 0
Arbaco, Oktoobar 21, 2015 (Daljir) —Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka IOM ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan 700-qof oo Kenyan ah oo iyagu ka tirsanaa Xarakada Al-shabab iyo Daacish ay si nabad galya ah dalkooda ugu laabteen.
Warbixintaan ayaa ka koobnayd 36-bog waxaana diyaariyay IOM iyo golaha sare ee Muslimiinta dalka Kenya,waxana ay tilmaameen in inta ugu badan ay dadkaasi kasoo goosteen kooxaha reer galbeedka ugu yeeran argagexisada kadib markii hesiis lala galay ay noqon waayen kuwo ay faa’ido ka helaan.
Qaar kamid ah Kenyankasi ayaa la sheegay in ay ka faaideyteen cafiskii xukuumada Kenya ay fidisay bishii April uuna ku dhawaaqay Wasiirka arimaha gudaha Kenya Joseph Nkaissery.
Warbixinta hay’ada socdaalka aduunka ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in in Kenyanka qaarkood si awood leh loo askaareeyay ayna tababar ku soo qaateen Soomaliya oo qaarkood xitaa hogaan ay ka qabtaan Al-shabab.
Warbixinta ayaa sidoo kale waxa lagu cadeeyay in dadka kasoo baxay Al-shabab e Kenya dib ugu laabtay da’dooda u dhaxeyso 24sano ilaa 34-sano jir.
Hay’ada waxa ay shaaca ka qaaday in wareysi ay la yeelatay koox soo laabatay oo ka kooban 185-qof oo u dhiganta %30 dadka degaanada Kilifi, Kwale, iyo Mombasa.
Warbixinta waxa ay leedahay in muwaadiniintaani horey ay u ahaayen kuwo xamaasha inta aysan galin ama ku biirin Xarakada Al-shabab.
Madaxweyne Xasan oo Sheegay in Shacabka laga Qayb-galinayo Talada Dalka